Jizọs bidoro ozi ya ozugbo ahụ, “na-ekwusa ma na-ezisa ozi ọma alaeze Chineke.” (Luk 8:1) Jizọs dị obiọma, dịrị nwayọọ ma hụ ndị mmadụ n’anya otú ahụ e buru n’amụma na ọ ga-adị. Ihe ọ kụziiri ndị mmadụ baara ha uru, gosikwa na ọ hụrụ ha n’anya. Ọ gwọrọ ndị mmadụ “ụdị ọrịa ọ bụla” ha na-arịa. Ihe niile a o mere gosiri na Chineke nọnyeere ya. (Matiu 4:23) Ndị mmadụ, ma ndị ukwu ma ndị nta, bịakwutere Jizọs. Ha kwuru na ha “ahụwo Mesaya ahụ”!—Jọn 1:41. Jizọs buru amụma na tupu Alaeze ya amalite ịchị ụwa, a ga-enwe agha, ala ọma jijiji, na ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ. Ọ gwara mmadụ niile ka ha ‘na-eche nche.’—Mak 13:37.
mailto:?body=“Anyị Ahụwo Mesaya Ahụ”!%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2013725%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Anyị Ahụwo Mesaya Ahụ”!